moethagyar.info: Downgrade iTunes version For Any Reasons
Downgrade iTunes version For Any Reasons
iOS5ကို iTunes မှတစ်ဆင့် update လုပ်ပြီးကာမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် iOS 4.3.xx ကို Downgrade ပြန်ဆင်းချင်ကြသူများ နှင့် အခြား အကြောင်းများကြောင့် iTunes ကို Downgrade ဆင်းချင်ကြသူများ အတွက် လမ်းညွှန်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ iOS5ကနေ downgrade ဆင်းဖို့ ဆိုရင်၊ အရင်လို Firmware တစ်ခုထဲ သီးသန့်တန်းပြီးဆင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ ပထမဦးဆုံး iTunes ကို Downgrade အရင် ဆင်းရပါလိမ့်မယ်။ မိမိရဲ့iTunes version ကို စစ်ဆေးဖို့ဆိုရင်တော့....
ပထမဦးစွာ iTunes ကိုဖွင့်ပြီး Help ကိုသွားပါ။ About iTunes ကို click နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Pop up window ပေါ်လာပြီး iTunes ရဲ့version ကို Scroll Text နဲ့ ပြသပေးပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်ကတော့ Windows user ဖြစ်လို့iTunes downgrade ဆင်းနည်းကို Windows အခြေပြုပြီး တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ှScreen Shot ပုံများမှာ Mac OS X Theme ပြောင်းထားလို့Mac ဒီဇိုင်းဖြစ်နေပေမယ့် Windows ပါ။
လုပ်ငန်း မစမီ လိုအပ်တဲ့ iTunes version ကို Download ဦးစွာလုပ်ကြပါစို့ ...
>> Download iTunes 10.3.55 (Win 64 bit)
>> Download iTunes 10.3.55 (Win 32 bit)
မိမိ Windows အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ iTunes ကို Download အရင် ရယူပါ။
မိမိ PC ထဲရှိ C:\_Users\_[your name]\_My Music လမ်းကြောင်းမှ " My Music " folder ကို အခြားသင့်လျှော် လုံခြုံသော နေရာတွင် Copy ထပ်မံပွားယူထားပါ။
Stat Menu -> Control panel -> Programs and Features (Add and Remove) ထဲကိုဝင်ပြီး လက်ရှိ PC ထဲမှ iTunes ကို အောက်ပါ အဆင့်များ အတိုင်း Remove လုပ်ပါ။
1. Apple Application Support
အဆင့်လိုက် အားလုံးကို Uninstall လုပ်ပြီးပါက CC Cleaner ကိုသုံးပြီး PC ကိုရှင်းလင်းပေးပါ။ အဆင့် (၅)
PC ကို Restart ချပါ။
ယခုအဆင့်တွင် iTunes ကို လှည့်ကွက် အနည်းငယ်ဖြင့် ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ကစားမှသာလျှင် iTunes ကို Downgrade ချလို့ ရပေမည်၊ နို့ ပါက iTunes version အမြင့်ကို တင်ထားဖူးခဲ့၍ အနိမ့်သို့ပေးဆင်းလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ အဆင့် (၆)
C:\_Users\_[your name]\_My Music -> iTunes -> iTunes Library.itl ကိုတွေ့ ပါလိမ့်မည်။ တွေ့ ပါက
iTunes Library.itl ကို iTunes Library.itl.old ဟု အမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
အထက်ပါ လမ်းကြောင်းထဲမှာပင် ရှိသော "Privious iTunes Libraries" folder ကိုဖွင့်ပါ။
အတွင်းမှာ iTunes Library 2011-0 အစရှိသော ရက်စွဲများနှင့် File အချို့ ကို တွေ့ ရပါမည်။
နှစ်သက်ရာ File တစ်ခုခုကိုရွေးပြီး Copy လုပ်ပါ။
C:\_Users\_[your name]\_My Music -> iTunes ထဲသို့Paste ချပြီး File name ကို iTunes Library.itl အဖြစ်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
အခုဆိုရင် iTunes 10.3.55 ကို ထုံးစံအတိုင်း Install လုပ်နိုင်ပါပြီ။ Install လုပ်ပြီးပါက iOS5မှနေ၍ iOS 4.3xx သို့Downgrade ဆင်းနိုင်ကြပါပြီ။
iTunes ၏ မည်သည့် အနိမ့် version ကိုမဆို ဤအဆင့်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီး အဆင့် (၈) နေရာတွင် နှစ်သက်ရာ version အနိမ့်ကို အစားထိုး Install လုပ်ပါ။ Email This
zmo zmoOctober 22, 2011 at 2:35 PMမိုကျတယျဗြို့... ကြေးဇူးပါဗြာ...ReplyDeletecaspersharkOctober 25, 2011 at 3:10 PMiTunes တော့ downgrade ဖွဈသှားတယျ ဒါပမေယျ့ ios5device လညျးသှယျလိုကျရော restore လုပျဖို့မပျေါဘူး itunes 10.5 ကိုပဲလုပျခိုငျးနတေယျ ကနြျောက itunes ကို 10.1 ထိ ခလြိုကျတာပါအဲ့ ဒါဘယျလို restore လုပျရမလဲ????????ReplyDeleteမိုးသိကွားOctober 26, 2011 at 12:13 PMiTunes version သိပျနိမျ့သှားလို့iOS5device ကို iTunes က လကျမခံတော့ပဲ iTunes ကိုသာ Update လုပျခိုငျးတာ ဖွဈနိုငျပါတယျ...ReplyDeletecaspersharkOctober 27, 2011 at 10:48 AMမရဘူးဗြို့iTunes 10.3.1.55 အထိ ပဲနှိမျ့ထားတာပဲiTunes 10.5 ပဲမွှငျ့ခိုငျးနတေယျ ကူညီပါဦးReplyDeletemyoNovember 1, 2011 at 7:38 PMဟုတျတေ အကိုရေ iTunes 10.5 ပဲ မွှငျ့ခိုငျးနတေေ..ကြှနျတျောလတေို့ငျပတျနပေီ လုပျပါအုံးအကိုရေ..ReplyDeleteညီNovember 18, 2011 at 4:41 PMအဲ့တာက Ipad 2အတှကျရော အဲ့နညျးနဲ့ ဆငျိးလို့ရလားမသိဘူးဗြReplyDeletenaing NINEJuly 14, 2013 at 2:29 AMmy iphone4 of weather icon is not working. how can i do it. please !!!ReplyDeleteAdd commentLoad more...
"LIKE" လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် သတင်းအသစ်များကို ရယူပါ...▼
Easy iDevice Guide
Click Book to Download!!
မြန်မာသီချင်းဆိုင်သို့>>
Download Free Apps Site
iOS7နှင့်အထက်ကို ယနေ့ထိ Jailbreak လုပ်လို့ မရသေးတာ အားလုံးပဲသိကြပါလိမ့်မယ်။ Jailbreak မရသေးတဲ့အတွက် မြန်မာစာ အခက်အခဲကို ရင်ဆိုင်နေကြရမှာ...
မိမိ၏ လက်ရှိ Apple ID ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သုံးလို့ မရသောသူများ၊ ယခုမှ စတင်၍ Apple ID ရယူမည့်သူများ သို့ မဟုတ် နောက်ထပ် Apple ID...
Tethered Jailbreak for iOS 7+ (iPhone4Only)
iOS 7+ ကို Tethered Jailbreak လုပ်နိုင်မယ့် GeekSn0w tool တစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ Tool ဟုဆိုသော်လည်း Script Application တစ်ခုသာဖြစ်လို့ Redsn...
Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below▼ Get This Widget From Best Ways of Blogging RECENT COMMENTS